ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ Psa အောက်ဆီဂျင် Generator ကိုဓါတ်ငွေ့လုပ်ခြင်းစက်ရုံ China Manufacturer
Hunan Eter Electronic Medical Project Stock Co., Ltd. [Hunan,China] လုပ်ငန်းအမျိုးအစား:Manufacturer Main Mark: Africa , Asia , Caribbean , East Europe , Middle East ထုတ်ကုန်:11% - 20% Cert:ISO13485, ISO9001, OHSAS18001, ASME, CE ဖေါ်ပြချက်:ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ Psa အောက်ဆီဂျင် Generator ကို,ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအောက်ဆီဂျင်စက်ရုံ,Psa အောက်ဆီဂျင် Generator ကိုဓါတ်ငွေ့လုပ်ခြင်းစက်ရုံ
Home > ထုတ်ကုန်များ > အောက်စီဂျင် Generator ကို > removable အောက်ဆီဂျင် Generator ကို > ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ Psa အောက်ဆီဂျင် Generator ကိုဓါတ်ငွေ့လုပ်ခြင်းစက်ရုံ
1. ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ Psa အောက်ဆီဂျင် Generator ကိုဓါတ်ငွေ့လုပ်ခြင်းစက်ရုံ ဖေါ်ပြချက်
PSA အခြေခံမူနှင့်အတူ ETR ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ Psa အောက်ဆီဂျင် Generator ကိုဓါတ်ငွေ့လုပ်ခြင်းစက်ရုံတိုက်ရိုက် compressed လေကြောင်းကနေ 93% ± 3% သန့်ရှင်းစင်ကြယ်အောက်စီဂျင်ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လုပ်နိုင်သည်။ အဆိုပါဆေးဘက်ဆိုင်ရာ Psa အောက်ဆီဂျင် Generator ကိုဓါတ်ငွေ့လုပ်ခြင်းစက်ရုံ Atlas Copco လေကြောင်း Compressor, SMC ရေခဲသေတ္တာလေကြောင်းလေမှုတ်စက်နှင့် filter, လေကြားခံအကြံပေးအဖွဲ့နှင့်အောက်စီဂျင်ကြားခံအကြံပေးအဖွဲ့, ETR PSA အောက်စီဂျင်စက်ရုံ, အောက်စီဂျင်အာနိသင်တိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်အောက်စီဂျင်ဖြည့်ဘူတာရုံပါဝင်သည်ဖြစ်ပါတယ်။
compressed လေနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်အဓိကစက်ရုံတစ်အချို့သောအဆင့်အထိလေမှုတ်စက်နှင့် filter မှတဆင့်သန့်စင်သည်။ Air ကိုကြားခံအရှင် compressed လေကြောင်းအရင်းအမြစ်များ၏ပွောငျးခွငျးလျှော့ချရန် compressed လေထု၏ချောမွေ့ထောက်ပံ့ရေးများအတွက်ထည့်သွင်းထားသည်။ အဆိုပါစက်ရုံတစ်ဦးအချိန်သက်သေပြအောက်စီဂျင်မျိုးဆက်နည်းလမ်းဖြစ်သော PSA (ဖိအားလွှဲထိစိမ့်) နည်းပညာနှင့်အတူအောက်စီဂျင်ထုတ်လုပ်သည်။ 93% မှာတပ်မက်လိုချင်သောအသန့်ရှင်းစင်ကြယ်၏အောက်ဆီဂျင်± 3% ကုန်ပစ္စည်းဓာတ်ငွေ့ချောမွေ့ထောက်ပံ့ရေးများအတွက်အောက်စီဂျင်ကြားခံအကြံပေးအဖွဲ့မှကယ်နှုတ်တော်မူ၏ဖြစ်ပါတယ်။ ကြားခံအကြံပေးအဖွဲ့ထဲမှာအောက်စီဂျင် 4bar ဖိအားမှာထိန်းသိမ်းထားသည်။ အောက်ဆီဂျင်အာနိသင်တိုးမြှင့်မှုနှင့်အတူအောက်ဆီဂျင်ဖိအား 150bar မှရောက်ရှိနိုင်ပါတယ်, ပြီးတော့အောက်ဆီဂျင်ဆလင်ဒါအဆာဘူတာနှင့်အတူဆလင်ဒါထဲမှာဖြည့်ပါ။
2.Medical Psa အောက်ဆီဂျင် Generator ကိုဓါတ်ငွေ့လုပ်ခြင်းစက်ရုံ အားသာချက်
3. ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ Psa အောက်ဆီဂျင် Generator ကိုဓါတ်ငွေ့လုပ်ခြင်းစက်ရုံ အရည်အသွေးထိန်းချုပ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်
4. ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ Psa အောက်ဆီဂျင် Generator ကိုဓါတ်ငွေ့လုပ်ခြင်းစက်ရုံ မော်ဒယ်ကို Select လုပ်ပါ
Eter 2003 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး 2016 ခုနှစ်တွင် 839074 ၏စတော့ရှယ်ယာကုဒ်အတူ NEEQ (အမျိုးသား equity Exchange နှင့်ကိုးကားချက်များ) တွင်ဖော်ပြထားသော။
Eter ထိုကဲ့သို့သောဆေးဘက်အောက်စီဂျင်မျိုးဆက်ဖြေရှင်းချက် / လေဟာနယ်အနုတ်လက္ခဏာဖိအားစုတ်ယူခြင်းဖြေရှင်းချက် / ဖြေရှင်းချက် / ဆေးရုံအိပ်ရာခေါင်းကိုယူနစ်ဖြေရှင်းချက် / သူနာပြုခေါ်ဆိုမှုစနစ်စသည်တို့ကိုဖြည့်စွက်ဆေးဖက်ဆိုင်ရာအောက်ဆီဂျင်ဆလင်ဒါအဖြစ်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအင်ဂျင်နီယာများအတွက်အဓိကအားဖြင့်ပေါင်းစည်းဖြေရှင်းချက်ပေးသူဖြစ်ပါသည်
1. တိုင်းကိုရောင်းကုန်ပစ္စည်းသည်ကိုရောင်းကုန်ပစ္စည်းများအတွက်သုံးလတစ်ကြိမ်စစ်တမ်းများအတွက်သဲလွန်စ file ကိုချိန်ညှိခြင်း။
Eter ကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ပြဿနာတွေလျှင် 3. အာမခံကာလအတွင်းအခမဲ့ On-site ကိုဝန်ဆောင်မှုများနှင့်ပြုပြင်ပေး။
4. အပိုအစိတ်အပိုင်းများနှင့် On-site ကိုဝန်ဆောင်မှုအာမခံကာလအပြီးအကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းနှင့်အတူပြောင်းလဲသွားပါလိမ့်မည်။
48 နာရီအတွင်းမည်သည့်ပြဿနာများအတွက်ဖြေရှင်းနည်းပေးခြင်းအခမဲ့ 5.7* 24 နာရီအွန်လိုင်းဝန်ဆောင်မှု။
6. ဖောက်သည်လိုအပ်ခဲ့လျှင်7ရက်အတွင်းနှင့်အတူ On-site ကိုဝန်ဆောင်မှုများအတွက်အတွေ့အကြုံရှိပြီးနောက်-အရောင်းအင်ဂျင်နီယာတာဝန်ပေးဖို့။ (စဉ်းစားရပါမည်ဗီဇာလျှောက်ထား)
ဖြေကျနော်တို့ 2003 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးအောက်ဆီဂျင်ဓာတ်ငွေ့ Cylinder ဖြစက်၏ထုတ်လုပ်သူဖြစ်ကြသည်။
2 ။ အမိန့်ကဘာလဲ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ Psa အောက်ဆီဂျင် Generator ကိုဓါတ်ငွေ့လုပ်ခြင်းစက်ရုံလုပ်ငန်းစဉ်အား?
တစ်ဦး။ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး --- ငါတို့အားလုံးကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းလိုအပ်ချက်များကိုသည်။
ခ။ စျေးနှုန်း --- အားလုံးရှင်းရှင်းလင်းလင်းသတ်မှတ်ချက်များနှင့်အတူအရာရှိတဦးကကိုးကားပုံစံ။
က c ။ ပုံနှိပ်ဖိုင် --- PDF ကို, အာဣမြို့, CDR, PSD, ရုပ်ပုံ resolution ကိုအနည်းဆုံးအား 300 dpi ဖြစ်ရမည်။
ဃ။ စာချုပ်အတည်ပြုခြင်း --- မှန်ကန်သောစာချုပ်အသေးစိတ်ကိုသည်။
အီး။ ငွေပေးချေမှုရမည့်စည်းကမ်းချက်များကို --- Negotiable အ။
f ။ ထုတ်လုပ်မှု --- အစုလိုက်အပြုံလိုက်ထုတ်လုပ်မှု
ဆ။ shipping --- ပင်လယ်, လေသို့မဟုတ်ဆက်သားဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ အထုပ်၏အသေးစိတ်ရုပ်ပုံပေးအပ်ပါလိမ့်မည်။
ဇ။ installation နဲ့ကော်မရှင်
သင်အသုံးပြုငွေပေးချေ၏ 3.What အသုံးအနှုန်းများ?
T / T, L ကို A / C စတာတွေ
4 ။ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ Psa အောက်ဆီဂျင် Generator ကိုဓါတ်ငွေ့လုပ်ခြင်းစက်ရုံတစ် prompt ကိုကိုးကားရဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
သငျသညျအကြှနျုပျတို့ကိုဖို့စုံစမ်းရေးကော်မရှင်သို့ပေးပို့သည့်အခါ pls ကြင်နာစွာနည်းပညာဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောအတူကပေးပို့ပါ။
1) O2 စီးဆင်းမှုနှုန်း: _____ Nm3 / နာရီ (သို့မဟုတ်ဘယ်နှစ်ယောက်ဆလင်ဒါသငျသညျ (တစ်နေ့လျှင် 24 နာရီဖြည့်ချင်ကြဘူး))
2) O2 သန့်ရှင်းစင်ကြယ်: _____%
3) O2 ဥတုဖိအား: _____Bar
4) ဗို့အားနှင့်ကြိမ်နှုန်း: ______ V ကို / PH သည် / Hz
ကုန်ပစ္စည်းကဏ္ဍ : အောက်စီဂျင် Generator ကို > removable အောက်ဆီဂျင် Generator ကို
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ Psa အောက်ဆီဂျင် Generator ကို
Psa အောက်ဆီဂျင် Generator ကိုဓါတ်ငွေ့လုပ်ခြင်းစက်ရုံ
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအောက်ဆီဂျင် Generator ကို
Psa ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအောက်ဆီဂျင် Generator ကို
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအောက်ဆီဂျင် Generating စက်
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ Psa အောက်ဆီဂျင် Generator ကို ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအောက်ဆီဂျင်စက်ရုံ Psa အောက်ဆီဂျင် Generator ကိုဓါတ်ငွေ့လုပ်ခြင်းစက်ရုံ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအောက်ဆီဂျင် Generator ကို Psa ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအောက်ဆီဂျင် Generator ကို ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအဆင့် Psa အောက်ဆီဂျင် Generator ကို ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအောက်ဆီဂျင် Generators ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအောက်ဆီဂျင် Generating စက်